Iinqwelomoya abayi cathing ithambeka glide.
kubalulekile Iinqwelomoya abayi cathing ithambeka glide.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #479 by geniousabhishe1
Eneneni i ukulandwa 737 164 pack isiseko livery, noseko B787 pack kwaye xa i ukubhabha ukuba i ukufumanisa ukuba asingeniswanga kokukhwela ithambeka glide. Ngokuzenzekelayo imigca phezulu kunye moya kodwa ayithethi sitsala ithambeka glide.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #482 by Gh0stRider203
Molo (ok kakuhle Nngokobuchwepheshe kwemini apha eTexas).
Ndithanda ukuba ukubhabha i B747-400LCF amaxesha amaninzi, yaye uye waphawula ukuba kakuhle INKOLISO moya wam. Andiqinisekanga kutheni oko kukuthi, ngokunyaniseka. Ndithanda ukuba kuhle ezilungileyo "sibhabhe ibhola" ngesandla, kodwa ukunyaniseka ... bendingayi uthembe ikhompyutha ukuba ndibenzele kum lol mna ndiyamazi uh QW757 kuyenza phakathi kwayo, kodwa ngokunyanisekileyo yenza Me luvo lol
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #497 by Tonny0909
Qiniseka ukuba xa ubeke "Yiya" kwi, u khubaza "ALT HLD"
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: Gh0stRider203, JanneAir15
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #500 by JanneAir15
Aa ... ngoku andazi ukuba kutheni na ukuba iingxaki kunye neProjekthi Airbus A380. Enkosi kakhulu ekuncedeni kwakhona Tonny0909!
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #518 by geniousabhishe1
Enkosi wesiphakamiso yakho kodwa iingxaki zam shwaka xa i got sp2 ifakiwe kwindlela wam.
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #519 by WilliamB
Mna le ngxaki phambi kwaye eyona ndlela ingcono ukujongana nayo ukuba mhlawumbi ewamisela ukuba localiser ngaphambili nokuphakama enye okanye umgama elifanayo ukusuka evulekile kodwa ngaphantsi kokuwa. Kwakhona yintoni enokunceda na ukuba kwakamsinya njengoko sungula i ILS cofa indlela Bamba. zama la kwaye ukuba ngaba ukwenza umlindo iqhinga on youtube okanye kwenye indawo. Uninzi localisers na kwi 2000-2500ft njengoko ndawo ukuba. Banike bonke eyadlulayo.
Ixesha ukwenza page: 0.238 imizuzwana